Galaxy Archives ၏အုပ်ထိန်းသူများ - Brick Fanatics
က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ
Black Friday weekend တွင် Zavvi UK ရှိ LEGO အတွဲများ စျေးကျသွားသည်။
27 / 11 / 2021 27 / 11 / 2021 Matt Yeo ပါ 82 Views စာ0မှတ်ချက် 41682 သူartအင်းအိုင် City ကြောငျး, 41683 သစ်တောမြင်းစီးခြင်းစင်တာ, 60292 မြို့စင်တာ, 71365 Piranha Plant Power Slide တိုးချဲ့ရန်သတ်မှတ်မည်, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Avengers, Lego CIty, Lego Friends, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego စူပါမာရီယို, မာရီယို, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, စူပါမာရီယို, Thanos, Zavvi
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လက်ရှိ Black Friday သီတင်းပတ်ကုန် အရောင်းအ၀ယ်များအပြင်၊ UK လက်လီရောင်းချသူ Zavvi သည် စျေးနှုန်းပိုမိုကျဆင်းခဲ့သည်။
LEGO နှစ်ခုရယူပါ။ Marvel Zavvi တွင် $35 လျှော့စျေးဖြင့် အတွဲတစ်ခုတွင် Eternals အစုံရှိသည်။
06 / 11 / 2021 07 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 145 Views စာ0မှတ်ချက် Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Arishem, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, စာချုပ်, အပေးအယူ, နိစ္စထာဝရ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, lego အပေးအယူ, Lego Marvel, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Marvel, ပေးကမ်း, Zavvi
Zavvi သည် LEGO အမျိုးအစားစုံကို လက်ခံကျင်းပနေသည်။ Marvel အစုအဝေးတစ်ခုတွင် Eternals အသစ်နှစ်ခုဖြင့် ယခုငွေစုပါ။
Lego Marvel 76155 Arishem ၏ Shadow သုံးသပ်ချက်တွင်
05 / 11 / 2021 09 / 11 / 2021 z ဇရ Wexler 226 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, Ajak, Arishem, နတ်သမီး, နိစ္စထာဝရ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Ikaris, Kingo, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, သေးသေးလေး, reviews, ဆာစီ, အဆိုပါ LEGO Group
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော LEGO Marvel Eternals range သည် နောက်ဆုံးတွင် ရုပ်ရှင်၏ ပွဲဦးထွက်အတွက် အချိန်မီ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည် - သို့သော် တတ်နိုင်သည်။
Marvel Guardians of Galaxy ဒါရိုက်တာသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော LEGO minifigure ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်
12 / 10 / 2021 12 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 181 Views စာ0မှတ်ချက် Adam Warlock ပါ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3, ဂျိမ်းဂွန်, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU
Adam Warlock မှဖြစ်သည် Marvel Guardians of the Galaxy Vol အတွက်ကာတွန်းများကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၃ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရအံ့
31 / 08 / 2021 31 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 715 Views စာ0မှတ်ချက် 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်, 76196 Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, City, Friends, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Galaxy အားလပ်ရက်အထူးစောင့်ရှောက်သူများ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ထွန်းပြက္ခဒိန်, Lego CIty, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel, Lego Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, Lego Star Wars, Marvel, Star Wars
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 432 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 304 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ယွန်ဒူး
တတျနိုငျသ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? ဒီနတ်ဆိုး LEGO minifigure ကိုပြန်ယူခဲ့လား။
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 493 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, သေးသေးလေး, Nebula, ကြယ်စင်သခင်, စတား-သခင်ဘုရား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အဆိုပါ Lego Marvel အခင်းအကျင်းကိုလာမည့်အရာပေါ် မူတည်၍ နှစ်စုံခွဲထားပြီးဖြစ်သည်။ စီးရီး၊ ဒါပေမယ့်အခြား
27 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Matthew O'Shea 787 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers, ချစ်သူ, Drax, Gamora, Groot, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, mantissa, Marvel, Nebula, reviews, ဒုံးပျံ raccoon, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, အဆိုပါ Benatar, အဆိုပါ LEGO Group, Thor, တိုနီ Stark, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး